CNC ထွင်းထုစက် CM စီးရီးစက်ရုံ - China CNC ထွင်းစက်စက် CM Series ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
slant အမျိုးအစား CNC ခုံစက်
ပြားချပ်ချပ်အမျိုးအစား CNC ခုံစက်
မြန်နှုန်းမြင့်စက် V85P စက်
အစိတ်အပိုင်းများထုတ်စက်စက်စင်တာ V ကိုစီးရီး
Box Way မှိုပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်စင်တာ VMC စီးရီး
CNC ထွင်းစက်စက် CM စီးရီး
5 ဝင်ရိုးတန်း Machinubg စင်တာ
အသေးစား Gantry အမျိုးအစားစက်ရုံ
အကြီးစား Gantry အမျိုးအစားစက်ရုံ
အလင်းမြန်မြန် Gantry အမျိုးအစားစက်ရုံ
NC ကြိတ်စက် KJ စီးရီး
CNC gantry အမျိုးအစားစက်စင်တာ
760mm Gantry အကျယ် CNC ဒေါင်လိုက်စက်မှ 600 * 500 * 250mm Travel Inclued
စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၆၀၀ * ၅၀၀ မီလီမီတာမော်ဒယ်: CM650B ခရီးသွားလာ - ၆၀၀ * ၅၀၀ * ၂၅၀ မီလီမီတာအလှည့်အပြောင်း - ၅၀၀ မှ ၂၄၀၀၀၀ နာရီပေ၊ ဗိုင်းလိပ်တံ - ၅.၅kwkw ဗိုင်းလိပ်တံ - BT30 အကျယ်အကျယ် - ၇၆၀mm ၂၄၀၀၀RPM ဗိုင်းလိပ်မြန်မြန် CNC ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်သတ္တု ၆၀၀ အတွက်ထွင်းခြင်းစက် * 500 * 250mm ခရီးသွားစံသတ်မှတ်ချက်များ - ၁။ အအေးပေးစနစ် - ဗိုင်းလိပ်ကိုရေနံဖြန့်ဖြူးစေသောအအေးခံ၊ ရေစုပ်စက်အတွင်းရှိရေသို့မဟုတ်ရေနှင့်အအေးခံသည့်အရည်သို့မဟုတ်စုပ်စက်မှရေမှုတ်ဆေးများ ၂။ Gantry ဖွဲ့စည်းပုံ - ကော်လံနှစ်ခုလုံးသည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မှိုပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်မြင့်မားသောတင်း ၀ န်းမှု 24000/18000rpm CNC အက္ခရာတင်။ စက်စက်
စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၈၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာအရောင် - ရွေးချယ်နိုင်သော Controller: LNCand အခြားသူများ၏အကျယ် - ၆၅၀kgs ဗိုင်းလိပ်တံ - BT30 အမြင့်တင်ဇယား - 400kgs ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း - ၂၄၀၀၀ / ၁၈၀၀၀rpm တရုတ်မြန်နှုန်းမြင့်သတ္တု cnc ထွင်းထုခြင်းနှင့်မှိုစက်ပြုလုပ်ရန်အတွက်စက်ကြိတ်စက်။ မာကျောသောစက်ကိုယ်ထည်နှင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုသည်မြင့်မားသောလည်ပတ်နှုန်းတွင်တည်ငြိမ်သည်။ ၂။ CM860 အတွက်အထူးအားဖြည့်ဗိုင်းလိပ်တံအမှုဒီဇိုင်း၊ ဖြတ်တောက်နိုင်မှုသည် ၃ တိုးလာခဲ့သည်။ ဗိုင်းလိပ်တံ၊ ဘောလုံးဝက်အူ၊
မှိုပြုလုပ်သော CNC သတ္တုထွင်းထုစက် ၅၀ မှ ၃၀၀ မီလီမီတာအကွာအဝေးရှိ Tool Head နှင့် Table ကြားတွင်
အမည်: CNC ထွင်းထုစက်ပုံစံ - CM650B လုပ်ငန်းနယ်ပယ် - သတ္တုဖြင့်ဖြတ်ထားသောဗိုင်းလိပ်တံလှည့်ခြင်း - ၂၄၀၀၀rpm ဗိုင်းလိပ်တံ - စားပွဲ၏ E25 အမြင့်တင် - ၃၀၀ ကီလိုဂရမ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်း - ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ချောအပြီးသတ်ကုန်ချိန် - ၂၈၀၀ ကီလိုဂရမ်တရုတ်မြန်နှုန်းမြင့်သတ္တုစီနိုထွင်းခြင်းနှင့်မှိုစက်အတွက်ပုံသွင်းစက် X / Y / Z ၀ င်ရိုးသည် linear guide လမ်းဖြစ်သည်၊ ၃ ရိုးရိုးစံမြန်မြန်သောအစာ ၁၀ မီတာ / မိနစ်၊ ၂၄ မီလီမီတာ / မိနစ် CM650B အတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၂ မြင့်မားသောတိကျမှု၊
သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်း CNC အက္ခရာတင်သောစက်စက်အဖုံးနှင့်အဖုံး Y ၀ င်ရိုး
Model Name: CM600 လျှောက်လွှာ: Metal Cutting Colour: Optional Precision: High Precision Guide Way: Linear Guide Way ၀ င်ရိုး - သုံးလုံး Axis China အမြန်နှုန်းမြင့်သတ္တု CNC ထွင်းထုခြင်းနှင့်ကြိတ်ခွဲစက်စက်မှထုတ်လုပ်သောကုန်ပစ္စည်းများ။ 1. X / Y / Z ဝင်ရိုးမှာလိုင်းလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။ လမ်း၊ ၃ ရိုးရိုးစံအမြန်အစာ ၁၀ မီတာ / မိနစ် ၂။ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မြင့်မားသောမာကျောသောစက်ကိုယ်ထည်သည်မြင့်မားသောလည်ပတ်နှုန်းတွင်ပြုပြင်မှုတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းသည် ၃။ CM650B အတွက်အထူးအားဖြည့်ဗိုင်းလိပ်တံပုံစံဒီဇိုင်း၊
တိုး။ ဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းအားဖြင့်အနက်နှင့်အဖြူ ၃ ၀ င်ရိုးတံ Gantry အမျိုးအစားကြိတ်စက်
စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၈၀၀ * ၆၀၀ အရောင် - အနက်၊ အဖြူရောင် Controller: LNC အလေးချိန် - ၃၅၀၀ ကီလိုဂရမ်ဗိုင်းလိပ်တံ - E25 / ER32 / BT30 စားပွဲတင်အမြင့်တင် - ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်တရုတ်မြန်နှုန်းမြင့်သတ္တုစီနိုထွင်းခြင်းနှင့်မှိုစက်အတွက်ပုံသွင်းစက်အတွက်ကြိတ်စက်သည်မြင့်မားသောတောင့်တင်းစက် CM860 အတွက်အထူးအားဖြည့်ထားသောဗိုင်းလိပ်တံပုံစံဒီဇိုင်း၊ အလားတူမော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖြတ်တောက်နိုင်မှုစွမ်းအားသည် ၂၀% တိုးတက်လာခဲ့သည်။ Spindle, ball screw နှင့်အခြားအဓိကအစိတ်အပိုင်းများသည် ...
Linear Guide Way CNC သတ္တုကြိတ်စက်စက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် 300kg Load
တပ်ဆင်မှုအချင်း: ၁၂၅ မီလီမီတာပုံစံ - CM650B လုပ်ငန်းနယ်ပယ် - သတ္တုဖြတ်တောက်မှုနှုန်း - ၁၅၀၀၀ / ၂၄၀၀၀rpm အမြန်နှုန်း - ဇယား၏ ၅.၃၉ အမြင့်တင် - ၃၀၀ ကီလိုဂရမ်ဗိုင်းငင်မော်တာ - ၄.၀kwkw တရုတ်မှမြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိထွင်းထုခြင်းနှင့်ပုံသွင်းစက်အတွက်ကြိတ်စက်။ X / Y / Z ၀ င်ရိုးသည် linear လမ်းညွှန်လမ်းဖြစ်သည်။ ၂.၃ ၀ င်ရိုးစံမြန်မြန်သောအစာ ၁၀ မီတာ / မိနစ်၊ ၂၄ မီလီမီတာ / မိနစ် CM650B အတွက်အထူးရွေးချယ်သည်။ ၃။ တိကျမှုမြင့်မား။ မာကျောသောစက်ကိုယ်ထည် ၃။ CM650B အတွက်အထူးအားဖြည့်ထားသောဗိုင်းလိပ်တံပုံစံဒီဇိုင်း။ ဗိုင်းလိပ်တံ ...
7.5KW Spindle Motor CNC ထွင်းထုစက်၊ မြန်နှုန်းမြင့် CNC ဒေါင်လိုက်စက်
စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၈၂၀ * ၁၀၂၀mm မော်ဒယ်လ် - CM-80100 ခရီးအကွာအဝေး - ၈၂၀ * ၁၀၀၀ - ၃၅၀ မီလီမီတာအလှည့်အပြောင်း - ၁၈၀၀၀ / ၂၄၀၀၀rpm ဗိုင်းလိပ်တံ - ၇.၅kw3Axis Servo Motor - ၁.၈kwkw တရုတ်မြန်နှုန်းမြင့်သတ္တု cnc ထွင်းခြင်းနှင့်မှိုစက်အတွက်ကြိတ်စက် အင်္ဂါရပ် ၁။ X / Y / Z ဝင်ရိုးသည် linear လမ်းညွှန်လမ်းဖြစ်သည်။ ၂။ အမြန်ပြေးနှုန်းတွင်တည်ရှိသည်။ ၃။ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မာကျောမှုမြင့်မားသောကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည် ၃။ HIgh တင်းကျပ်မှု finit element ဒီဇိုင်းစက်ပုံသွန်းခြင်း၊ ဗိုင်းလိပ်တံသေတ္တာအားကောင်းစေခြင်း ...
CNC ထွင်းထုစက် CM860၊ ၀ င်ရိုးသုံးလိုင်းလမ်းညွှန်လမ်း ၈၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာဇယား ၅.၅ ကီလိုဂရမ် / ER25 / ၂၄၀၀၀rpm ပေတံ
စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၈၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာပုံစံ - CM-860 တံဆိပ်ကပ်ခြင်းခရီးစဉ် - ၆၈၀ * ၇၆၀ * ၃၃၀ မီလီမီတာအလှည့်အပြောင်း - ၅၀၀ မှ ၂၄၀၀၀၀rpm ဗိုင်းလိပ်တံ - ၅.၅kwkw Axis Servo မော်တာ - ၀.၈၅kw CNC ထွင်းထုစက်၊ ၀ င်ရိုးလိုင်းလမ်းညွှန်လမ်း ၈၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာ ထိုင်ဝမ်အမှတ်တံဆိပ် 5.5KW / ER25 / 24000rpm ဗိုင်းလိပ်တံကုန်ပစ္စည်း၏အင်္ဂါရပ် ၁။ X / Y / Z ဝင်ရိုးသည် linear လမ်းညွှန်လမ်းဖြစ်သည်။ ၂။ အမြန်နှုန်းလည်ပတ်မှုအတွက်အာမခံချက်၊ ချွတ်ယွင်းချက်သည်မြင့်မားသောအပြီးသတ်စက်ဖြစ်သည်။ ၃။ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မာကျောမှုမြင့်မားသောကားကိုယ်ထည် ၃။ မြင့်မားသောတင်းကျပ်သော finit element design design ...
မြင့်မားသောတိကျသော CNC အက္ခရာထွင်းစက် ၂၄၀၀၀ RPM Spindle Rotation Speed ​​CM-870 နှင့်အတူ
စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၈၀၀ * ၇၀၀ မီလီမီတာအမည် - CNC ထွင်းထုစက် X / Y / Z ခရီးသွားခြင်း - ၇၂၀ / ၈၀၀ / ၃၃၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ: ER25 ဗိုင်းလိပ်တံအချင်း: 5125mm ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း: ၂၄၀၀၀rpm အနံအဝင် / အနံ: 800mm X / Y / Z ရာထူးတိကျမှု: 0.006 /0.006/0.005 ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ: ၅.၅ ကီလိုဝပ်အမြန်နှုန်းမြင့်တိကျသော CNC ထွင်းထုစက် CM870 X၊ Y သည် linear လမ်းညွှန်လမ်း၊ ၀ င်ရိုး ၃ စံအလျင်အမြန်အမြန်နှုန်း ၁၀ မိနစ် / မိနစ်၊ ER25 spindle.BT30 ဗိုင်းလိပ်တံသည် CM870 အတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ မြင့်မားသောတောင့်တင်းစက်ကိုယ်ထည်သည်စဉ်အတွင်းပြုပြင်မှုတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းသည်။
linear လမ်းညွှန်ဒေါင်လိုက်3Axis CNC ထွင်းစက်ကြိတ်စက် ER32 ဗိုင်းလိပ်တံ CM-8120
စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၈၂၀ * ၁၂၀၀mm အမည် - CNC အက္ခရာလှည့်စက် X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးစဉ် - ၈၂၀ / ၁၂၀၀ / ၃၅၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ: ER32 X / Y / Z ၀ င်ရိုးအမြန်အစာ - ၈/၈/၈ M / min ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း - ၅၀၀ -24000rpm Gantry ၏အကျယ်: 900mm Spindle Motor: 7.5KW ER32 spindlehigh တိကျသော CNC ထွင်းထုစက် CM-8120 ၂၄၀၀၀rpm / ER32electric spindle ကိုအလင်းရောင်ထွင်းထုခြင်းနှင့်ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ အရည်အသွေးမြင့်သတ္တုများပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ရောင်ခြည်ကော်လံ gantry frame design ကိုချမှတ်သည်။ လျင်မြန်စွာနှင့် s များအတွက်သင့်လျော်သည် ...
ကြီးမားသောခရီးသွား CNC Gantry စက်စက် ၃၅၀၀ * ၂၄၀၀ * ၂၉၈၀mm အရွယ်အစား
စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၈၂၀ * ၁၂၀၀mm မော်ဒယ်လ် - CM-80120 ခရီးသွားရန် - ၈၂၀ * ၁၂၀၀ * ၃၅၀ မီလီမီတာအလှည့်အပြောင်း - ၁၈၀၀၀ / ၂၄၀၀၀rpm ဗိုင်းလိပ်တံ - ၇.၅kw ၃ Axis Servo Motor: ၁.၈kw တရုတ်တရုတ်မြန်နှုန်းမြင့်သတ္တုစီနိုထွင်းခြင်းနှင့်မှိုစက်အတွက်ကြိတ်စက် အင်္ဂါရပ် ၁။ X / Y / Z ဝင်ရိုးသည် linear လမ်းညွှန်လမ်းဖြစ်သည်။ ၂။ အမြန်ပြေးနှုန်းတွင်တည်ရှိသည်။ ၃။ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မာကျောမှုမြင့်မားသောကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည် ၃။ HIgh တင်းကျပ်မှု finit element ဒီဇိုင်းစက်ပုံသွန်းခြင်း၊ ဗိုင်းလိပ်တံသေတ္တာအားကောင်းစေခြင်း ...
မြန်နှုန်းမြင့် CNC အက္ခရာတင်စက်စက် 24000RPM ER32 Spindle CM-8100
စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၈၂၀ * ၁၀၂၀mm အမည် - CNC အက္ခရာလှည့်စက် X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးသွားခြင်း - ၈၂၀ / ၁၀၀၀ / ၃၅၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ - ER32 / BT30 X / Y / Z ၀ င်ရိုးအမြန်အစာ - ၈/၈/၈ M / min ဗိုင်းလိပ်တံလည်ပတ်မြန်နှုန်း : 24000rpm Gantry ၏အကျယ်: 900mm Spindle Motor: 7.5KW 24000rpmhigh တိကျစွာ CNC ထွင်းထုသည့် CM-8100 ◆ X, Y, Z ပုဆိန်များသည် linear လမ်းညွှန်လမ်းအတွဲများဖြစ်သည်။ ၀ င်ရိုးသုံးမျိုးကျွေးသောအမြန်နှုန်းစံသည် ၁၀ မီတာ / မိနစ်ဖြစ်သည်။ စက်ကိုမြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်တင်းကျပ်မှုတို့ဖြင့်ကန့်သတ်ထားသောဒြပ်စင်အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊
လိပ်စာ:၆၄ ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၊ Fumin လုပ်ငန်း၊ ပင်းမြို့၊ longgang dirstric၊